Endrik'io pejy io tamin'ny 9 Oktobra 2019 à 08:08
2 976 octets ajoutés , il y a 2 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Aprily 2019 à 14:05 (hanova)
k (Farango sodona)
Endrik'io pejy io tamin'ny 9 Oktobra 2019 à 08:08 (hanova) (esory)
=== Tantaran'ny Ilay fanekemFiekem-pinoana amin'ny teny grika sy latinaapostolika ===
Ny fanekem-pinoana apostolika dia heverin'ny mpanaraka ny lovantsofina fa noforon'ireo Apostoly. Sahala amin'ny ankamaroan'ny fanekem-pinoana kristiana dia ahitana fehezan-tsoratra telo ny Fanekem-pinoana apostolika, ka ny tsirairay amin'ireo fehezan-tsoratra ireo dia atokana ho an'ny persona tsirairain'ny [[Trinite]], dia ny [[Andriamanitra Ray|Ray]] sy ny [[Zanak'Andriamanitra (kristianisma)|Zanaka]] ary ny [[Fanahy Masina]]. Ny fehezan-tsoratra voalohany dia manomboka amin'ny hoe "Mino an'Andriamanitra Ray Tsitoha"<ref name=":0"><small>Ao amin'ny dikan-teny protestanta malagasy no ahitana izany.</small></ref> na "Izaho mino an'Andriamanitra Ray Tsitoha"<ref name=":1"><small>Ao amin'ny dikan-teny katolika malagasy no ahitana an'io.</small></ref>; ny faharoa amin'ny hoe "Mino an'i Jsesosy Kristy"<ref name=":0" /> na "Izaho mino an'i Jesoa Kristy"<ref name=":1" />, ary ny fahatelo dia manomboka amin'ny "Mino ny Fanahy Masina aho"<ref name=":0" /> na "Izaho mino ny Fanahy Masina"<ref name=":1" />. Ireo fanambarana telo ireo dia mifanandrify amin'ny fanontaniana telo apetraka amin'ny olona miomana hatao batisa na batemy tao amin'ny fiangonana tany amin'ireo taonjato voalohany teo amin'ny tantaran'ny [[kristianisma]].
Hatramin'ny taonjato hafa-15 dia ninoana fa ny Fiekem-pinoana apostolika dia nosoratan'ireo apostoly, ka ny apoastoly tsirairay dia nanolotra fehezankevitra iray avy. Tsy fantatra raha tena avy amin'ny apaostoly marina ity fanekem-pinoana ity, nefa ny lohateniny dia toa milaza fa ny fehezankevitra tsirairay ao amin'io fiekem-pinoana io dia mampahatsiahy izay voasoratra ao amin'ny [[Testamenta Vaovao]], ary ny fanekem-pinoana dia nosoratana tamin'ny vanimpotoana niandohan'ny Fiangonana.
== Votoatin'ny Fanekem-pinoana apostolika ==
==== Dikan-ten'ny Eglizy Katolika Apostolika Romana eto Madagasikara ====
Fiekem-pinoana apostoloka ao amin'ny FFKM▼
▲==== Fiekem-pinoana apostolokaapostolika ao amin'ny FFKM ====
== Fandraisan'ny fiangonana tsirairay azy ==
Ny Fanekem-pinoana apostolika dia ampiasain'ny ankamaroan'ny Fiangonana Tandrefana toy ny [[Katolisisma|Katolika]]<small>,</small> ny [[Loteranisma|Loterana]]<small>,</small> ny [[Anglikanisma|Anglikana]]<small>,</small> ny [[Fiangonana nohavaozina|Presbiteriana]] (na Nohavaozina)<small>,</small> ny [[Metodisma|Metodista]] ary ny [[Fiangonana kongregasionalista|Kongregasionalista]]. Tsy ampiasain'ny Fiangonana Tatsinanana (isan'izany ny [[Fiangonana ortodoksa|Ortodoksa]]) ity fiekem-pinoana ity noho izy tsy mino fa ny Apostoly tokoa no nanoratra azy satria raha izany no izy dia tsy maintsy ho hita tao amin'ny [[Asan'ny Apostoly]] izany.▼
== Fiangonana mampiasa azy ==▼
Ny Fiekem-pinoana apostolika dia ampiasaina amin'ny batisa ao amin'ny ankamaroan'ny Fiangonana tandrefana. Ambara ny Fiekem-pinoana apostolika ao amin'ny Fiangonana katolika amin'ny fotoam-pivavahana isan'andro. Ao amin'ny ankamaroan'ny Fiangonana protestanta dia ampiasaina io fanekem-pinoana io amin'ny fanompoam-pivavahana isan'Alahady. Ny Anglikana sy ny Loterana dia mampiasa azy amin'ny vavaka maraina sy hariva.
▲Ny Fanekem-pinoana apostolika dia ampiasain'ny ankamaroan'ny Fiangonana Tandrefana toy ny [[Katolisisma|Katolika]]<small>,</small> ny [[Loteranisma|Loterana]]<small>,</small> ny [[Anglikanisma|Anglikana]]<small>,</small> ny [[Fiangonana nohavaozina|Presbiteriana]] (na Nohavaozina)<small>,</small> ny [[Metodisma|Metodista]] ary ny [[Fiangonana kongregasionalista|Kongregasionalista]]. Tsy ampiasain'ny Fiangonana Tatsinanana (isan'izany ny [[Fiangonana ortodoksa|Ortodoksa]]) ity fiekem-pinoana ity noho izy tsy mino fa ny Apostoly tokoa no nanoratra azy satria raha izany no izy dia tsy maintsy ho hita tao amin'ny [[Asan'ny Apostoly]] izany.
▲=== Fiangonana mampiasa azytatsinanana ===
Tsy ampiasain'ny Fiangonana Tatsinanana (isan'izany ny [[Fiangonana ortodoksa|Ortodoksa]]) ity fiekem-pinoana ity noho izy tsy mino fa ny Apostoly tokoa no nanoratra azy satria raha izany no izy dia tsy maintsy ho hita tao amin'ny [[Asan'ny Apostoly]] izany. Ny [[Fanekem-pinoana nikeana]] no ampiasain'ny Fiangonana ortodoksa.
* [[Fanekem-pinoana atanaziana]]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/975498"